Khamiis 11 Bisha Kow Iyo Tobnaad 2021
Bandhigga Carwadu Kani waa mashruuc naqshadeyn bandhig ah oo loogu talagalay soosaaraha dharka casriga ah ee nooca loo yaqaan 'roadshow' ee Shiinaha. Mawduuca wadadani wuxuu iftiiminayaa awooda dhalinyarada ay u leedahay inay ku ekaato muuqaalkooda, waxayna astaan u tahay dhawaqa qaraxyada ee wadooyinka lagu sameeyo dadweynaha. Foomka Zigzag waxaa loo adeegsaday inuu yahay sheyga ugu weyn ee muuqaalka, laakiin leh qaabayn kala duwan markii laga dalbaday waababyada magaalooyin kala duwan. Qaab dhismeedka waababyada bandhigyadu dhammaantood waxay ahaayeen “xirmo-qaybo-qayb ah” oo horay loo sii dejiyay warshadda oo lagu rakibay goobta. Qaybo ka mid ah dib ayaa loo isticmaali karaa ama dib loo qori karaa si ay u sameeyaan naqshad waab cusub oo loogu talagalay joogsiga xiga ee wadada.
Naqshadaynta Naqshada Garaafka
Arbaco 10 Bisha Kow Iyo Tobnaad 2021
Naqshadaynta Naqshada Garaafka Buugani wuxuu kusaabsan yahay naqshada garaafka; Waxay bixisaa cad, eegis faahfaahsan qaab dhismeedka naqshadeynta sida habka loo isticmaalo in lagula xiriiro dhagaystayaasha leh dhaqammo kala duwan iyada oo loo marayo qaababka naqshadeynta waxaa ka mid ah macnaha qaabeynta garaaf ahaan door ahaan, Hababka naqshadeynta sida farsamooyinka, Naqshadeynta qaabaynta sida xaaladda suuqa, Qaabeynta naqshada tusaalayaal diyaarsan waxayna ka kooban yihiin shaqooyin laga soo qaaday hal abuur sare oo mala-awaal ah, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu muujiyo mabaadii'da naqshada.
Talaado 9 Bisha Kow Iyo Tobnaad 2021
Xafiiska Iibka “Mountain” waa mowduuca ugu weyn ee xafiiska iibka, kaasoo dhiirrigeliyay asalka juquraafiyeedka Chongqing. Qaabka marwaladaha cirridka ah wuxuu ku sameysanayaa qaab saddex geesood ah; oo waxaa jira xaglo badan oo geesinimo leh iyo xaglo fiiqan iyo geesoodyo ku yaal darbiyada muuqaalka ah iyo xisaabaadka qaabdhismeedka qaab aan caadi ahayn, si ay u muujiyaan fikradda “buur”. Intaas waxaa sii dheer, jaranjarooyinka isku xira sagxadaha waxaa loogu talagalay inay noqdaan marinka godka dhex yaal. Dhanka kale, Nalalka LED-ka waxaa laga laalaadiyaa saqafka, iyaga oo ku dayaya goobta roobka ka da'o oo soo bandhigaya dareen dabiici ah, si loo jilciyo aragtida oo dhan.
Garaafyada Guriga Fasaxa
Garaafyada Guriga Fasaxa Istuudiyaha PRIM PRIM wuxuu u sameeyay aqoonsi muuqaal ah guriga martida SAKA oo ay ku jiraan: magaca iyo naqshada astaanta, sawirada qol kasta (naqshad astaan ah, qaab dhismeedka derbiga, naqshadaha sawirada derbiga, qalabka barkimmada iwm), naqshadeynta websaydhka, kaararka boostada, sumcadaha, kaararka magaca iyo casuumaad. Qol kasta oo ku yaal guriga martida loo yahay ee 'SAKÀ' wuxuu soo bandhigayaa halyeeyo ka duwan oo la xiriira Druskininkai (magaalo dalxiis oo ku taal Lithuania guriga ayaa ku yaal) iyo hareeraheeda. Qol kasta wuxuu leeyahay astaan u gaar ah oo ah eray-fure ka yimid halyeeyga. Astaamahani waxay ka muuqdaan sawirada gudaha iyo walxaha kale ee sameysanaya aqoonsigeeda muuqaalka.
Axad 7 Bisha Kow Iyo Tobnaad 2021
Roogaga Roogyadu waa iska siman yihiin, hadafku wuxuu ahaa in laga hortago xaqiiqadan fudud. Cilmiga saddex-cabbirka waxaa lagu gaaraa kaliya seddex midab. Noocyada kala duwan ee codadka iyo qoto dheer ee daartu waxay kuxiran tahay balaca iyo cufnaanta xargaha, halkii ay ka ahaan lahayd palette weyn oo midabyo ah oo ku dhejin kara boos gaar ah, sidaas darteed u oggolaanaya adeegsiga dabacsan. Laga soo bilaabo kor ama ka fog, rooggu wuxuu u eg yahay xaashi isku laabma. Si kastaba ha noqotee, inta aad fadhido ama ku jiifsaneyso sariirta, fekerka laablaabyada ayaa laga yaabaa inaan la dareemin. Tani waxay horseed u noqotaa adeegsiga khadadka fudud ee soo noqnoqda oo lagu raaxaysan karo qaab naqshad aan caadi ahayn oo u dhow.
Kafeega Bandhigga Carwadu Naqshadaynta Naqshada Garaafka Xafiiska Iibka Garaafyada Guriga Fasaxa Roogaga